Si ku meel gaar ah u baddelka adeeg bixiyaha iyadoo aan la joogin goobta
Waa anaga kuwa qiimeynayna haddii taageerada iyo ku haboonaysiintu ay adiga kuu tahay adeeg sax ah. Iyadoo ay sabab u tahay cudurka faafay ee koroona waxaad si ku meel gaar ah adigoon joogin goobta u dooran kartaa adeeg bixiye jooga dalka oo dhan. Adigaaga ku nool aag aanu ka jirin wax adeeg bixiye ah waxaad inta lagu jiro muddadan dooran kartaa adeeg bixiye jooga magaalo kale si aad adeegan u hesho adigoon joogin goobta. Fursadan waa ku meel gaar iyo wakhti xadeysan. Maalinta ugu dambeysa ee bilaabida waa 31-ka December.
Taageeradan waxay leedahay afar heer oo kala duwan. Haddii aanad ku hadal Iswiidhish ama Ingiriisi waxaad xaq u leedahay in aad kaga qaybqaadato afkaaga hooyo.
Haddii mid kamid ah 186 degmooyin aad deggan tahay, waxaad beddelkii kugu habboon adeegga Abaabulid iyo is-qabadsiin Rusta och matcha.
Waa annaga cidda qiimeynta ku sameyneysa in taageerada iyo wax isla eegiddu ay kugu habboontahay, iyo heerka sida ugu fiican kuugu habboon. Sidatan ayaa qiimaynta ugu dhaqaaqna.